सेन्ट लुइस - डचटाउन STL.org मा छिमेकी सुधार विशेषज्ञ (NIS / NSO)
छिमेक सुधार विशेषज्ञ छिमेकीहरू र शहर सेवा प्रदायकहरू बीचको सम्पर्क हो। साथै छिमेकी स्थिरीकरण अधिकारीहरूको रूपमा पनि चिनिन्छ, NISs, वा NSOs, तपाईंको छिमछिको सुधार विशेषज्ञ तपाईंलाई आफ्नो छिमेकीमा चलिरहेको मुद्दाहरूको लागि मोड्नुहुन्छ।
छिमेकी सुधार विशेषज्ञहरू सेन्ट लुइसको शहरका अंश हुन् छिमेक स्थिरीकरण टोली। यो NSTयसको उद्देश्य पुलिस, निर्वाचित अधिकारीहरू, सरकारी एजेन्सीहरू, सामाजिक सेवा संगठनहरू, समुदाय समूहहरू र व्यक्तिहरूलाई सँगै लिएर आउँदै गरेको समस्याहरूको स्थायी समाधानहरू पहिचान गर्नु हो।
एक छिमेकी सुधार विशेषज्ञले के गर्छ?
एक छिमेकी सुधार विशेषज्ञहरूको प्राथमिक काम समस्या समाधान गर्ने हुनु हो। तपाईंको NIS CSB वा पुलिसलाई रिपोर्ट गरिएका मुद्दाहरूको समाधान गर्न विभिन्न शहर एजेन्सीहरूसँग काम गर्दछ।
NIS हरूले सक्रिय रूपमा तपाईको छिमेकमा सम्भावित समस्याहरू पनि खोज्दछ। तपाईंको एनआईएस तपाईंको वार्डमा लगभग हरेक दिन सम्भव कोड उल्ल .्घन वा उपद्रवी गतिविधि जस्तै बारम्बार लोटरि or वा अवैध डम्पि forको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरूले यो पनि प्रमाणित गरे कि नागरिकहरूको सेवा ब्यूरोमा रिपोर्ट गरिएका मुद्दाहरूको समाधान गरिएको छ।
तपाईंको पड़ोसी सुधार विशेषज्ञले खाली भवनहरू र उपद्रवी सम्पत्तीहरूको स्थिति अनुगमन गर्दछ। कहिलेकाँही तिनीहरू सम्पत्ती मालिकहरूसँग काम गर्न सक्षम हुन्छन् र समस्याहरू समाधान गर्नका लागि। अन्य अवस्थाहरूमा, एनआईएसले उद्धरण जारी गरेर र रिपोर्ट फाइल गरेर त्यस्ता सम्पत्तिहरूको मालिकहरूको विरूद्ध सम्भावित केसहरू निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।
तपाईको NIS तपाईले अक्सर भेट्नु हुनेछ छिमेकको बैठकहरूमा। प्रायः बैठकहरूमा, उनीहरूले उनीहरूको क्रियाकलापको बारेमा अद्यावधिक जानकारी दिनेछन् र प्रश्नहरूको उत्तर दिनेछन्, चिन्ता सम्बोधन गर्दछन्, र त्यहाँका अन्य सुझावहरू सुन्नेछन्। किनभने तपाईंको एनआईएस तपाईंको वार्डमा छ अन्य सहरका एजेन्सीहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको छ, जब तिनीहरू अनुमति दिन्छन् प्रायः पर्याप्त विशिष्ट जानकारी प्रदान गर्न सक्षम हुनेछन्।
जब तपाइँको छिमेकी सुधार विशेषज्ञलाई सम्पर्क गर्ने
शहर सेवाहरूको साथ मुद्दाहरू उचाल्ने
सहर सेवाहरु को लागी धेरै मुद्दाहरु को लागी तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ नागरिकको सेवा ब्यूरो (CSB)। तर केहि मुद्दाहरूलाई थप हस्तक्षेप आवश्यक पर्दछ। तपाईंको एनआईएस सहयोग गर्न सक्दछ जब तपाईं नागरिक सेवा सेवा ब्यूरोबाट पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न समस्या भएको छ वा जब तपाईंको मुद्दा सामान्य CSB सेवा अनुरोधको दायरा बाहिर छ।
धेरै सहरका बासिन्दाहरूले उनीहरूको एल्डरर्लाई बोलाउन छिटो तुल्याउँदछ जब उनीहरूका समस्याहरू चित्तबुझ्दो ढ addressed्गले सम्बोधन गरिएको छैन जस्तो लाग्छ। धेरै जसो कलहरू सम्भवत: तपाईको छिमेकी सुधार विशेषज्ञद्वारा राम्रोसँग चलाइएको हुन्छ। छिमेकी सुधार विशेषज्ञ एक पूर्ण-समय स्थिति हो, र तपाईंको NIS सँग उपकरण र स्रोतहरू छन् तपाईंको मुद्दा समाधान गर्न मद्दत गर्न।
तपाईंको NIS तपाईं र शहर सेवा प्रदायकहरू बीच एक सीधा सम्पर्क हो। तिनीहरूसँग चलिरहेको समस्याहरूको निगरानी गर्ने र शहर एजेन्सीहरूसँग काम गर्ने समस्याहरूको समाधान गर्न अझ ठूलो क्षमता छ। छिमेकी सुधार विशेषज्ञहरूले पनि सम्बन्धित मुद्दामा एल्डरलाई अद्यावधिक राख्न आ-आफ्नो वार्डमा एल्डरपर्सनसँग नजिकबाट काम गर्दछन्।
छिमेकी सुधार विशेषज्ञहरूले पनि शहरका बासिन्दाहरू र सेन्ट लुइस मेट्रोपोलिटन प्रहरी विभाग बीचको सम्पर्कको रूपमा काम गर्छन्। तिनीहरू विशेषसँग नजिकबाट काम गर्दछन् SLMPDसमस्या समस्या युनिट। तपाइँको एनआईएस पुलिस र अन्य एजेन्सीहरु संग उपद्रवी सम्पत्तीहरु संग काम गर्न को लागी काम गर्न सक्छ।
उपद्रव सम्पत्ति ठेगानाहरू हुन् जसले पुलिस सेवाको लागि अत्यधिक कलहरू प्राप्त गर्दछन्, बारम्बार कोड उल्लंघन गुनासोहरू हुन्छन्, र वरपरका छिमेकीहरूका लागि अन्य चलिरहेका समस्याहरू निम्त्याउँछन्। संदिग्ध लागूपदार्थको कारोबार भएको घर, एउटा व्यवसाय जुन आपराधिक गतिविधि आकर्षित गर्न र सक्षम गर्दछ जस्तो देखिन्छ, वा खाली असुरक्षित जुन प्राय असुरक्षित वा अविश्वसनीय नै सबै उपद्रव गुणहरूको उदाहरण हुन सक्छ।
मुद्दामा निर्भर गर्दै, तपाइँ पुलिस वा नागरिक सेवा ब्यूरोमा या त उपद्रवी गतिविधि रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। संदिग्ध आपराधिक गतिविधिको लागि, तपाईं पुलिसलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो आपतकालीन हो भने, 911 314१ लाई कल गर्नुहोस्। अन्यथा, तपाईले आपतकालीन लाइन कल गर्न सक्नुहुनेछ (231१1212) २XNUMX१-१२२। धेरै अन्य मुद्दाहरूको लागि, तपाईं सक्नुहुन्छ CSB का साथ एक रिपोर्ट फाइल गर्नुहोस् वा तपाइँको NIS लाई सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईंको NIS सम्पर्क जानकारी फेला पार्न तल हेर्नुहोस्।
सँधै ठेगाना निर्दिष्ट गर्नुहोस्!
यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ जब चलिरहेको उपद्रव गतिविधि रिपोर्ट गर्दा तपाईंले समस्या सम्बन्धी ठेगाना जब सम्भव भएमा निर्दिष्ट गर्नुहुन्छ। उपद्रवी सम्पत्तीको बिरूद्ध मुद्दा निर्माण गर्न, पुलिसले सेवाको लागि कल गर्दछ र CSB सेवा अनुरोधहरू ठीक ठेगानामा रिपोर्ट गर्नु आवश्यक छ।
तपाईको छिमेकमा उपद्रवी सम्पत्तीको विशिष्ट ठेगाना थाहा पाउँदा सुनिश्चित हुन्छ कि सबै प्रमाणित उजूरीहरू सही सम्पत्तीमा लग ईन गरिएको छ र पुलिस र अन्य शहर एजेन्सीहरूलाई मुद्दाहरूको छानबिन गर्न मद्दत गर्दछ। अर्को सम्पत्तीको बारेमा गुनासो दर्ता गर्नको लागि पुलिस वा CSB लाई कल गर्दा कहिले आफ्नै ठेगाना नदिनुहोस्।
वार्ड द्वारा तपाइँको NIS खोज्नुहोस्
प्रत्येक शहर वार्ड एक तोकिएको NIS छ। यदि तपाईं कुन वार्डमा हुनुहुन्छ निश्चित हुनुहुन्न भने शहरको भ्रमण गर्नुहोस् ठेगाना र सम्पत्ती खोज पृष्ठ र तपाईंको ठेगाना प्रविष्ट गर्नुहोस्।
२th औं वार्ड छिमेकी सुधार विशेषज्ञ
क्रिश्चियन सल्लर २ 25 औं वार्डको लागि एनआईएस हो, जसले बहुसंख्यक डचटाउन उचित रूपमा समेट्छ, साथसाथै माउन्ट प्लेइजन्ट र कार्नेलेटलाई पनि। क्रिश्चियन सल्लरलाई सम्पर्क गर्नुहोस् SallerC@stlouis-mo.gov वा (314) 657-1375।
9th औं वार्ड र २० औं वार्ड छिमेकी सुधार विशेषज्ञ
बारब पट्स the औं वार्डको लागि एनआईएस हो, जसमा ग्रेटर डचटाउनको पूर्वी भाग - समुद्री भिल्ला र माउन्ट प्लेजेन्टको अंशहरू सामेल छन्। उनी २० औं वार्डको लागि एनआईएस हुन्। २० औं वार्डमा डचटाउनको उत्तरी भाग, सबै ग्रेभियोस पार्क र समुद्री भिल्लाका केही अंशहरू सामेल छन्। तपाईं बार्ब पट्ट्समा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ PottsB@stlouis-mo.gov वा (314) 657-1370।
11th औं वार्ड र २० औं वार्ड छिमेकी सुधार विशेषज्ञ
क्याथ्रिन वुडार्ड ११ औं वार्ड र १th औं वार्डको लागि एनआईएस हो। ११ औं वार्डले ग्रेटर डचटाउन क्षेत्रको दक्षिणपूर्वी किनारा समेट्छ। १th औं वार्डमा सेन्ट मेरी हाई स्कूलको नजिक डचटाउनको दक्षिणपश्चिमी कुना समावेश छ। तपाईं यसमा क्याथरिन वुडार्डलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ वुडर्ड K@stlouis-mo.gov वा (314) 657-1355।
यस पृष्ठ साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पृष्ठ अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो जुलाई 3rd, 2020 .
डचटाउन STL.org डचटाउन छिमेकी संसाधनहरू छिमेकी सुधार विशेषज्ञहरु